Iphupha Malunga nezixhobo zezoLimo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ifama nganye ixhotyiswe ngenani elikhulu lezixhobo ezahlukeneyo zezolimo. Oku kuvumela abalimi ukuba balime kwaye balime amasimi abo. Apho ngaphambili amahashe ebesetyenziswa ikakhulu "njengeetrektara," ngoku ayinakuhanjiswa itrektara.
Xa izixhobo zezolimo zivela emaphupheni ethu, oku kuhlala kunentsingiselo enzulu. Iphupha kunqabile ukuba limele ukuba usebenza kwezolimo. Inqaku elinomdla nelibalulekileyo ekutolikeni, ngaphezulu kwako konke, yimvakalelo yeemvakalelo ezinxulumene nemeko yephupha.
1 Uphawu lwephupha «izixhobo zolimo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «izixhobo zolimo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «izixhobo zolimo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «izixhobo zolimo» - ukutolikwa ngokubanzi
Xa sisebenza intsimi kwilizwe lethu lamaphupha, sinokuyenza ngezixhobo ezahlukeneyo. Ke kusenokwenzeka ukuba yitrektara esiqhuba ngayo sitsala ikhuba ngasemva kwayo ukuze uvule kwaye udibanise umhlaba. Kwindlela yokutolika ngokubanzi, oku kunokuba kokwakho kumphuphi. Amandla y Ukunyamezela ukutyhila. Nangona kunjalo, inokukhokelela kumbuzo wento ebaqhubayo ebomini. Ngaba kukho into ekhuthazayo yangaphandle okanye ngaba amandla engaphakathi sisiseko salo mandla?
Kwitoliki yamaphupha, ikwadlala indima ukuba umntu ebexakeke ngumsebenzi yedwa okanye ukuba abantu abohlukeneyo basebenzise izixhobo ezahlukeneyo zezolimo. Le yokugqibela ibonisa amandla okuphupha Iqela phantsi. Nangona kunjalo, ukuba ujonga kuphela abanye abasebenza kweli lizwe, oku kungabonisa ukuba uziva ubizelwe kwizinto eziphezulu el mundo Ngokwenyani kwaye usete ezakho iinjongo eziphakamileyo kakhulu.
Ukuba umntu usebenza yedwa, umzekelo, ngekhuba, oku kunokuthetha ukuba ephupheni mpu melelo izakulinda. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba awuyi kubhabha usiya kuyo. Umsebenzi onzima, unyamezelo, kunye nokujongana nezithintelo kuthatha lukhulu ekuphupheni. Kodwa ekugqibeleni uyakufumana isivuno okanye umvuzo waso.
Uphawu lwephupha «izixhobo zolimo» - ukutolikwa kwengqondo
Kwingcaciso yeli phupha, uphawu lwephupha "izixhobo zezolimo" lunokusebenza njengomboniso wokuba injani imeko yobomi bomntu ophuphayo ngoku.
Ukutolika umfanekiso weli phupha "izixhobo zolimo", jonga indlela ekuvakala ngayo ukusebenza nezixhobo zezolimo. Oku kunokubonakalisa ukuqondainto onayo ngobomi bakho. Ngaba ububona ubomi njengomzabalazo wokunyuka ekufuneka ulungiswe ngokutsha yonke imihla? Okanye ngaba uziva ulula kwaye ujonge phambili kwimiceli mngeni eziswa lusuku ngalunye olutsha?
Nabani na omba nzulu emhlabeni ngesarha, ikhuba, okanye ezinye izixhobo zasefama utyhalele into kude kakhulu kwi-subconscious yakhe, nakwilizwe elivukayo. Imeko yephupha ingabonisa ukuba lixesha lokuba ubeke ezi zinto kwi ukuqonda qokelela. Kunokubakho amaxesha apho bekusengqiqweni ukufihla izinto ezibuhlungu nezothusayo phantsi komhlaba kwaye ngaloo ndlela sikhokelele ukuqonda kwethu kwezinye izinto. Kodwa ngoku lixesha elifanelekileyo lokuba uvule iingcango ezivaliweyo ze-subconscious. Ukuphupha kunokuthi emva koko kuvelise oko kungathanda ukuzibonisa.
Uphawu lwephupha «izixhobo zolimo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "izixhobo zezolimo" kukutolika kwamaphupha okomoya. umqondisoOko kusibonisa ukuba umsebenzi ngokwakho awuzange wenziwe. Ubomi utshintsho kunye nokunyakaza.
Kuphela ngabo bahlala bengqondo bhetyebhetye kwaye bajonge nezimvo ezingezizo ezabo abaya kuqhubela phambili kwindlela yabo yokukhula ngokomoya kwaye baya kuvuzwa ngobulumko.